शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र by Aruna Upreti | Ketaketi Online
Home » शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र by Aruna Upreti
posted by ketaketionline on Wed, 11/14/2018 - 08:40
आदरणिय शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी विभिन्न सरकारी र सामुदायिक स्कूलहरुमा वर्षेपिच्छे स्कूलको ड्रेस फेरिन्छ । सामूदायिक र सरकारी स्कूलमा आउने छात्रछात्रा गरीब समुदायका नै हुन्छन् स्कूलको व्यवस्थापनले ‘कमिशन’ का चक्करमा जब निलो रंगको सर्ट र प्यान्ट/ स्कर्टको सट्टामा “धर्के रातो, बैजनी जस्ता लुगाहरु लगाएर स्कूल आउनु, स्कूलको डे«स फेरियो” भन्ने उर्दी जारी गर्छन्, तब त कति गरीबहरु छात्राहरुले कि त स्कूल नै छोड्नु पर्छ, कि त धेरै छाक छोडनु पर्छ ।
यो विषयमा स्कूलका शिक्षकहरुलाई भन्दा “माथिबाट भएकोले हामी केही गर्न सक्दैनौ” भन्छन् । को माथि भन्दा कोही बोल्दैनन् । आकाशबाट ईश्वरले “स्कूलको यूनिफर्म फेर्नु” भनेर त पक्कै आदेश गरेको होइन होला । माथि भनेको शिक्षा मन्त्रालय हो भन्ने विचार गरेर मैले शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिवहरुलाई पनि मौखिक रुपमा यो ‘समस्या’ बताए । किनभने कतिपय विद्यार्थीका भाइ बहिनीले पनि दिदी दाजुको सानो भएको पुरानो निलो रंगको पाइन्ट र स्कर्ट लगाएर स्कूल आउँछन । तर यदि प्रत्येक वर्ष यूनिफर्म फेरिए त कसरी उनीहरुले लगाउन सक्छन ? अनि सरकारी “यूनिफर्म” फेर्नको मतलब त केही पनि छैन । यसले न शिक्षकले राम्रो पढाउँछ, न विद्यार्थीले राम्रो सिक्छ । के स्कूलको ‘यूनिफर्म’ बदल्नाले स्कूलका शौचालय सफा हुन्छ ?
शिक्षा मन्त्रालय उच्च अधिकारीलाई पहिले २–३ वर्षसम्म भन्दा भन्दा, कसैले वास्ता गरेनन् , दिक्क भएपछि आम संचार माध्यममा आउन करै लाग्यो । प्रायः सबै शिक्षाविद कसरी विश्व विद्यालयमा पढाइ राम्रो गर्ने भने छलफल गर्छन् । तर प्राय कमैले स्कूलको पढाई र अवस्था सुधार्न तर्फ ध्यान दिन्छन् । त्यसमाथि पनि स्कूलको युनिफर्म वा ‘ड्रेस’ को बारेमा त कसैले करै उठाउँदैनन् । ठूला ठूला कुरा गर्नुको साटो साना कामलाई पनि विचार गरेर हेरि दिए त कमसेकम गरीब छात्रछात्रा पनि स्कूल त जान पाउँथे होला । दिदीको लुगा पुरानो भएपछि बहिनीले लगाएर स्कूल जान पाउने वातावरण बने त कती राम्रो हुन्थ्यो होला शिक्षा कन्त्रालयले यो कुरा बुझला ?